သုံးပင်လိမ် အရှုပ်တော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သုံးပင်လိမ် အရှုပ်တော်
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Sep 20, 2012 in Creative Writing | 34 comments
ဆိုင်အတွင်းမှ လူများမှာလည်း လူရွယ်၏ စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ် ပုံစံအား ကြည့်လိုက်၊ လူရွယ် သောက်သော စီးကရက်အား ကြည့်လိုက်ဖြင့် အမျိုးမျိုးသော မှတ်ချက်တို့ဖြင့် အချင်းချင်း တီးတိုး ပြောနေကြတော့၏။ လူရွယ်မှာမူ လက်ဖက်ရည်၏ ပြတင်းပေါက်မှနေ၍ ကောင်းကင်အား မော့ကြည့်ကာ တစ်စုံတစ်ရာအား စဉ်းစားနေလျက် ရှိလေတော့သည်။
ဆက်ဦးမည် ဆိုပါတော့ ဗျာ..
တွေးရခက်ကြီး နဲ့ ကျန်ခဲ့တယ်တော့….
ပြီးရောလားး မကျေနပ်ဘူးဗျာ… ဒီအတိုင်းထွက်သွားတာကို :harr:
အော် တန်းလန်းကြီးလား ……. ဆက်ပါဦး ကိုကြီးအံရေ … ဇာတ်လမ်းတွေသိပ်မရှုပ်ထွေးနဲ့နော် … သာမီးက အရမ်းရှုပ်ရင် မမှတ်နိုင်တော့ဘူးဂျ …….
ဆန့် ငင်ဆန့် ငင်ဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့  စောင့် နေမယ်
အဲဒီအရုပ်လေးတွေ ဘယ်ကဝယ်တာလဲ ဟင်။
ကိုကိုအံဇာရေ…။ ဒါက မင်းသိင်္ခလား မင်းမြတ်သူရ လား ….။
လက်ဖက်ရည်၏ ပြတင်းပေါက် မှာ ဆိုင်ကျန်ခဲ့ပါကြောင်း..။
ကိုနေ၀န်းနီရေ အံစာသိင်္ခသူရ ဖြစ်ပါကြောင်း..။
ကျန်တဲ့ တစ်ပင် ကိုဆက်ဖတ်ဖို့စောင့်နေပါတယ်….
ကောင်းခြင်း၊ ဆိုးခြင်းကို စောင့်မျော် နေပါတယ်
အေးလေ..ဘာမှလည်းမပြောဘူး..ဒီအတိုင်းကြီး ထားခဲ့တယ်…. လူဇိုး….
အရေးအသားတော်လိုက်ပုံများ တစ်ခန်းရပ်နားတာ ဘာမှမပြောပဲ မျှော်လင့်စောင့်စားအောင်ဖန်တီးပြီး ထားသွားတတ်တယ်လား။
ကြည့်ရတာ သူက အဲ့နားကနေ တရားမ၀င်ဖြန့်ဖြူးဖို့ အချိန်းအချက်လုပ်ပေးနေသလားမှ မသိတာ ။
ဒါကြီးက ဆိုက်ကိုကြီးလား မသိဖူး……
ခုလို လာရောက် အားပေးကြတာကို ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ် ခည ..
ဒီဇာတ်က နောက်နှစ်ပိုင်းလောက် ကျန်ပါသေးတယ် ခည ..
အားလုံးဂို ပီးဒေါ့မှ အေးဆေး ရီပလိုင်း လုပ်ပေးပါမယ် ခည ..
ခုဒေါ့ အလုပ်ထဲ ရောက်နေလို့ဘာ ခည ..
အာ…အလုပ်က အမြဲလုပ်နေရာ..လုပ်မနေနဲ့ပစ်ထားလိုက်..
အချိန်လုပြီး လာအားပေးတဲ့လူတွေ ပျံစာလေးတော့ ဖတ်ချင်ကြမှာပေါ့..
ခုခြက်ချင်း ရီပလိုင်း လုပ်ပေးလိုက်ပါ
အလုပ်က နောက် အပတ်မှ ဆက်လုပ်
အလုပ်က နောက် အပတ်မှ ဆက်လုပ် … ဒဲ့ …
နောက် အပတ် ဆက်မလုပ်ခင်
တစ်ခါတည်း တန်းပြုတ်သွားလိမ့်မယ် …
ညှော်နံ့မိရင် ကောင်းဘူး ..
နှာခေါင်းလေး ပိတ်ထားဘာ …
တော်ကြာနေ ညှော်နံ့ဂျောင့် နှာခေါင်းဂျီး ရောင်လာရင်
မမယ်မ က ကြိုက်တော့ဘဲ နေဘာဦးမယ် ..
ဦးဖွတ်ကျား ခည …
ဆက်ပါဦးမှာဘာ ခည ..
ဒီကြားထဲ အနော် သေသွားရင် သေသွားနိုင်ဒါမို့
အဲ့ ဆက်ပါဦးမည်ဂျီးကို မထည့်လိုက်ဒါဘာ ခည …
အားပေးတဲ့ ကျေးဇူးပါလို့ …
ဟုတ်ကဲ့ ခည …
ဆက်ရေးနေပါလယ် ခည ..
ကျေးဇူးပါ ခည ..
မမယ်မ ကိုလည်း ပစ်မထားပါနဲ့လို့ …
ဂျီးဒေါ် .. ပြီးသေးဘူးရယ် ..
အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါနော့ ..
သားသားရဲ့ အကျင့်ကိုဂ အဲ့လို တန်းလန်းဂျီး ဖစ်ဖစ် နေတတ်တာဂိုးဂျ ..
မာမီ မမှတ်နိုင်မှာစိုးလို့ ဇာတ်လမ်း ရှုပ်အောင် လုပ်တော့ဘူးနော် ..
ဒါပေသိ … ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပဲ
နောက်ထပ် နှစ်ပင်ထပ်လိမ်ဖို့ ကျန်သေးဒယ်ဂျ ..
ဒါလေးတော့ ခွေးလွှတ်နော် .. :harr:
ဆန့်ငင် ဆန့်ငင် ဖြစ်အောင် လုပ်ပါဘူးဂျာ ..
အားပေး ဖတ်ရှုတာ ကျေးဇူးပါ ..
နောက်လည်း လာဖတ်ဦးနော် ..
ဦးနေ ကတော့ လုပ်ပီ ..
ခု ဒီပို့စ် ရေးတဲ့ကောင်က အာပလာ ကောင်ဗျ ..
အဲ့ကောင်က ငကြောင်ပါဗျာ …
အဟဲ …. အဟီး …
အဲ့ဒါ အနော် ရှမ်းသွားဒါ …
ပြင်လိုက်မယ်နော် .. တေးဇူး …
နာမည်လည်း ပေးဒတ်ဒါဘဲနော် …
သူပေးလိုက်မှဘဲ “အံစာသိင်္ခသူရ” ဖြစ်တွားဒယ် … တေးဇူးဘာဂျာလို့ ..
ခုဟာက နှစ်ပင် ဟုတ်ဘူးဂျ ..
တစ်ပင်တည်း ရှိဒေးဒယ် ..
ဟုတ် .. အမနိုဗွီ
အဲ .. စောင့်နေဒယ်ဆိုလို့ ပြောရဦးမယ်ဂျ ..
ကောင်းခြင်း၊ ဆိုးခြင်းလို့ ဆုပေးဒါက
အဟဲ .. အဖိုးဂျီးနော် …
ကျုပ် ပြောရမလားဗျ ..
တကယ်ပြောမှ စိတ်မဆိုးနဲ့နော် …
အမငီး အမ မစံပါယ်ရယ် …
အနော့် အရေးအသားက ခပ်ညံ့ညံ့ပါဂျ ..
တစ်ခန်းရပ်ကြောင်း ဘာမှ မပြောဒါဂ
မသေချာမှာ စိုးလို့ဘာဘဲ ခညာ ..
အဟဲ .. အဟီး .. အဟူး ..
ထင်ချင်ဒလိုဒါ ထင်ဘာလို့ …
အဲ .. ဒါနဲ့ သူငယ်အံ ဆိုဒေါ့ ..
အနော်ဂ အမ လို့ သုံးလို့ ရလောက်ဒေါ့ဘူး ..
“ဂျီးဒေါ်” လို့ဘဲ ခေါ်ဒေါ့မယ်နော် ..
သုံးပင်လိမ် ဆိုတာဂ ဒီလိုပါဗျ ..
နောက်တော့ ပေါ်လာမှာပေါ့ဗျာ …
အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ ..
စောင့်နေမှာစိုလို့ မေးရဘာအုံးမယ် ..
ဘယ်နားမှာ စောင့်နေမှာဒုံး ..
တော်ကြာ နေရာမှားနေမှ ဒုတ်စွ ..
ဒီလိုရှိပါတယ် ဦးကောင်း ဆိုတဲ့အဖိုးကြီး ဟာ သူတောင်းစားဟန်ဆောင်ပြီး ၂လုံးအတိတ်ပေးစာရွက်တွေ ရောင်းနေတာကို ၂၅နှစ်အရွယ် စီးကရက်သောက်တဲ့ နယ်ထိန်းမောင်အံ က လာသတိပေးတဲ့အခါ ၊ ဦးကောင်းလဲ အခြေအနေမဟန်တော့ဘူးဆိုပြီး ၊ အဲဒီ တုနှိုင်းမှီ လဘက်ရည်ဆိုင်ရှေ့ ကနေ ဂွင်ပြောင်းသွားတာပါ
ဟုတ်တယ်မို့ လား အံကြီး
မဟုတ်လဲ မှားတယ်လို့ သာ မှတ်
ဂယ်ဒေါ့ အဲ့လိုဟုတ်ဘူးဂျ ..
အဲ့ဒီ ဦးကောင်း ဆိုတဲ့ လူဂျီးက နံမယ် အမျိုးမျိုးနဲ့ နေတဲ့ လူဂျီးဒဲ့ ..
သူ့ တကယ့် နာမည်အရင်းဂျီးကဒေါ့ ဦးပေ ဆိုလားဘဲ ..
အဲ့လူဂျီးဂ ၂ လုံး အတိတ်ပေး စာရွက်တွေ ရောင်းတာဟုတ်ဘူး ..
ဘောလုံး နိမိတ် စာရွက်တွေ ရောင်းဒါဒဲ့ … အဟိ ..
ကျုပ်ရောင်းတဲ့ စာရွက်တွေ ကို ပင်ရင်းဖြန့် ချီတာကတော့ ဂေဇက်အံကြီး တဲ့
ကော်မရှင်စား ကဖိုးထောင်ဂျီးရော ဘယ်ပျောက်နေဒုံးဂျ :har:
ကော်မရှင်စား ကဖိုးထောင်ဂျီးရော ဘယ်ပျောက်နေဒုံးဂျ :harr:
ဒိုင်ခံလောင်းကြေးထပ်တဲ့ ဘဲဥတဲ့ဟေ့ …. ပျောက်နေတာက သူ ……
အဲ့ ဂလောက် လုပ်ငန်းကြီးဆိုတော့
Accountant, Auditor လိုအပ်ရင်ပြောပါ….
မဟုတ်မှ လွဲရော ဒီလူကြီး………….
မြ၀တီရုပ်မြင်သံကြားမှာ လုပ်တာလား မသိဘူး……………
ဒီတစ်ခါ တော့ ၃ပင်ဘဲ လိမ်မှာ သေချာလား။
သုံးပင်ထက် ပိုလို့ကတော့ :buu: :harr:
ဓားမြှောင်က ခြောက်လက်မကျော်လို့ ရဲဖမ်းသွားတာများလား…။ သွားတိုင်ကွာ ၈၈အဖွဲ့ကို…
” သကြား ပုလင်း ” အံစာ.. အဟိ..